pixel ပါဝါ linear နှင့်အာရှရှိ Non-linear န်ဆောင်မှုများအတွက် virtualized အလိုအလျောက်နှင့်ဂရပ်ဖစ်တင်ဆက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » pixel ပါဝါ linear နှင့်အာရှရှိ Non-linear န်ဆောင်မှုများအတွက် virtualized အလိုအလျောက်နှင့်ဂရပ်ဖစ်တင်ဆက်
Rohde & Schwarz Booth 4T3-01, BroadcastAsia 2019, Suntec စင်္ကာပူ, 18 - 20 ဇွန်လ: pixel ပါဝါ linear, OTT နှင့် VoD အပေါ်ပရီမီယံန်ဆောင်မှုများအတွက်စံပြဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်စနစ်များ, ၎င်း၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်း၏နှစ်ခုအသစ်, virtualizable ဆော့ဖ်ဝဲလ်များပြနေသည်။ ဖြင့်၎င်း၏ဝယ်ယူအောက်ပါ Rohde & Schwarz နိုဝင်ဘာလ 2018 အတွက်, pixel ပါဝါ၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အထောက်အထားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောရပ်တည်ချက် 4T3-01 အပေါ်မိဘကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးတွဲပြဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အာရှတွင်တွေ့မြင်ခံရနှစ်ခုအသစ်ကဆော့ဖ်ဝဲလ်များ, မျိုးစုံလိုင်းများနှင့်မျိုးစုံအော်ပရေတာ supporting, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ပြည့်နှင့်ကယ်တင်သည့်ဂရပ်ဖစ်တင်းပလိတ်များတည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်လျှောက်လွှာများနှင့် StreamMaster ထုတ်လုပ်သူ, CREATE နေကြသည်။
ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်အသစ်တွေကနေနှစ်ခုနည်းပညာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ဖြေရှင်းနည်းကို set ကိုထည့်သွင်း pixel ပါဝါ: StreamMaster မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဂယ်လီယမ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestral ။ ဤရွေ့ကားပလက်ဖောင်းအများဆုံးထိရောက်မှုများအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝါ၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုပေးစဉ်တိကျစွာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးသောဖြေရှင်းချက်ပြုစုခံရဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် function ကို-ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဗိသုကာသုံးပြီးဆောက်လုပ်ထားကြသည်။
အဆိုပါဗိသုကာလုံးဝ virtualizable သည်နှင့်တစ်ဦးကော်ပိုရိတ်ဒေတာစင်တာ၌ဖြစ်စေ, မိုဃ်းတိမ်၌, စက်ခန်းထဲမှာဆက်ကပ်အပ်နှံကရိယာအတွက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခွင့်ကိုတိကျစွာအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်း created ခံရဖို့မိုဃ်းတိမ်၌အပြည့်အဝပရီမီယံရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်, အထိကြွယ်ဝသောစနစ်များကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့အလိုအပျခကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် 4k သို့မဟုတ် HDR ကိုထည့်သွင်းဖို့အတှကျဒါဟာအစ, သူတို့ကအလွယ်တကူ reconfigured နိုင်ဆိုလိုတယ် က Ultra HD.
"စားသုံးသူကိုယနေ့ချောမွေ့စွာအရည်အသွေး, အွန်လိုင်းဝေဟင်အပေါ်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး channel များကိုမြင်နိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ထား," ဂျိမ်းစ် Gilbert ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် pixel ပါဝါ။ "ဒါကမီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်သူတို့အဲဒီလိုအဖြစ်သင့်လျော်သောအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ messaging ဖြည့်စွက်, ဝယ်လိုအားန်ဆောင်မှုအပေါ်နှင့်ဗီဒီယို-up, ဖမ်းရန် linear ပလေးအောက်ကနေအလွန်လျှင်မြန်စွာအကြောင်းအရာန်းကျင်ကိုဖွင့်ဖို့ရှိသည်ဆိုလိုသည်။
"ဒီလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလိုင်းများ၏အဆောက်အဦလုပ်ကွက်ကြာနှင့်ဿုံတစ်ခုချင်းစီကို output ကို constructs တစ်ဦးအနည်းကိန်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်" ဟု Gilbert ကရှင်းပြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtualizable ပလက်ဖောင်းကသူတို့ကိုသည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတွေကိုအဓိပ္ပာယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် workflow နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူသတ်မှတ်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု, မည်သည့်အတိုင်းအတာမှာဒီအောင်မြင်ရန်အရိုးရှင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
pixel ပါဝါ wordwide ကုမ္ပဏီများမှထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာမှပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ထူးချွန်ပို့, ထုတ်လွှင့်အထူးပြုတစ် 30 တစ်နှစ်တွင် track record အပေါ်ဆွဲယူလာသည်။ ယနေ့ pixel ပါဝါ စနစ်များလိုအပ်ချက်များကို လိုက်. , ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောလစာ-အဖြစ်-စဉ်တွင်အဖြစ်မြို့တော်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အသုံးစရိတ်များအတွက်အသုံးပြုသူရဲ့ဦးစားပေးကိုက်ညီအသစ်စျေးနှုန်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူရရှိနိုင်ကြသည်သာကြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်, StreamMaster နှင့်ဂယ်လီယမ်, နှစ်ခု core ကိုပလက်ဖောင်းကနေ module တွေပေါ်ဆွဲ ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ပေးဆောင်-per-အင်္ဂါရပ်။
ဂယ်လီယမ်ပလေးအောက် အချိန်ဇယားဆွဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်တစ်ခု, ဘက်ပေါင်းစုံခေတ်မီပြီးအရွယ်မှာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် StreamMaster Deliverable, linear နှင့် OTT လိုင်းများများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံပလေးအောက်အင်ဂျင်, ကအကြောင်းအရာပေးပို့များအတွက်ဆိုနိုင်ပါတယ်အရွယ်မှာနှင့်အပြတ်အသတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ သို့မဟုတ်သုံးဦးစလုံး၏တစ်စပ်ထဲမှာ - ပလက်ဖောင်းဒေတာစင်တာ၌ဖြစ်စေ, မိုဃ်းတိမ်၌, စက်ခန်းထဲမှာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအော်ပရေတာများနှင့်စားသုံးသူအရည်အသွေး, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်ဒါတူညီဆော့ဖျဝဲကို virtual စက်တွေ၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တူညီတဲ့အဓိကပလက်ဖောင်းသစ်ကိုအပါအဝင်အခြားကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို, ကယ်မနှုတ်နိုင် StreamMaster ထုတ်လုပ်သူအဆိုပါ Multi-ရုပ်သံလိုင်း, Multi-အော်ပရေတာ virtualizable ဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့် StreamMaster BRAND24 /7ဂီယာအဘို့, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်အင်ဂျင်ကို။ StreamMaster Deliverable ဆက်ကပ်အပ်နှံ COTS ဆာဗာများ အသုံးပြု. 24 /7linear / OTT တီဗီများအတွက် software ကို-defined ပေါင်းစည်းပလေးအောက်အင်ဂျင်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ဒေတာစင်တာသို့မဟုတ်အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်၌ virtualized ။ ဒါဟာ SDI ကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကို real-time ဂရပ်ဖစ်များနှင့် DVE ၏ Real-time မာစတာထိန်းချုပ်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် IP ကိုစီး။ ဂယ်လီယမ်ပလေးအောက် Multi-ရုပ်သံလိုင်းအလိုအလျောက်ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကိုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-စံအလိုအလျောက်ဂီယာ, ပြည့်စုံရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်များအတွက်ထောက်လှမ်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ, ခေတ်မီဆန်းပြား, အရွယ်မှာအချိန်ဇယားဆွဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အလိုအလျောက်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဂယ်လီယမ်စက်ရုံ unrewarding နှင့်အသုံးမကျသောလက်စွဲစာအုပ်အလုပ်ဖျက်သိမ်းရေး, အလိုအလြောကျအသိဉာဏ်ဂရပ်ဖစ်တင်းပလိတ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်ခေတ်မီကလစ်များ, အထူးနှုန်းများသို့မဟုတ်အမြည်းထုတ်ပေးတဲ့ file ကို-based အကြောင်းအရာထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဆော့ဖ်ဝဲသတ်မှတ်ကမ်ဘာပျေါတှငျရင်ဆိုင်ရနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းကျနော်တို့မှာလုပျအမြားဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ pixel ပါဝါ"ဂျိမ်း Gilbert ကကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ "ဘာကိုတကယ်အရေးကြီးပါတယ်စစ်ဆင်ရေးအဆင်ပြေပြေနဲ့စီးပွားရေးအရတတ်နိုင်သောလမ်းအတွက်ဒါလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သက်သက်သာဆော့ဖ်ဝဲ Feature-rich, ခေတ်မီနည်းပညာပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်, COTS Hardware နဲ့အရာပေါ်ပြေး virtualizable ဖြစ်ပါသည်, pixel ပါဝါ အစိုင်အခဲ, သက်သေဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။ "
အေျကာင္းအရာ pixel ပါဝါတစ်ဦး Rohde & Schwarz ကုမ္ပဏီ
BirdDog ဖြန့်ချိ P4K - တစ်4"Sony ကအာရုံခံ Featuring တစ်ဦးက 1K အပြည့်အဝ Bandwidth NDI® PTZ ကင်မရာ - စက်တင်ဘာလ 16, 2019
4K BroadcastAsia မိုဃ်းတိမ်ကို COTS ဖန်တီး ဂယ်လီယမ်စက်ရုံ ဂယ်လီယမ်ပလေးအောက် ဂယ်လီယမ်™လုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestral HDR linear OTT pixel Powe ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက် Rohde & Schwaz StreamMAster BRAND StreamMaster Deliverable StreamMaster ထုတ်လုပ်သူ StreamMastter မီဒီယာထုတ်ယူခြင်း UHD virtualizable vod	2019-05-22